Warar Goosgoos ah oo ku saabsan Somaliya. Ruunkinet 26/10/2009
Dufcaddii 2aad ee ciidamada badda Soomaaliya oo tababar loo soo xiray
Munaasibad tababar loogu soo gaba gabaynayay Dufcaddii labaad ee Ciidanka Mariineyska Soomaalida ayaa manta ka dhacay magaalada Muqdisho.
Munaasibaddan oo ay ka qayb galeen Wasiiro, Xil dhibaano, Saraakiisha Ciidamada iyo Maamulka Gobolka Banaadir ayaa ugu horeyntii Ciidamada uu Tababarku u dhamaaday waxaa ay halkaa ku soo ban dhigeen Socod Gadda ka ciyaar ah oo ay ku muujinayaan Cuduudda.
Ciidankan oo dhamaystey Tababarka Hawlaha Ciidamada Badda oo muddo Sedax Bilood ah u socday ayaa waxaa ay yihiin dhamaantooda Dhallinyaro da'aadoodu ka yar tahay Soddon Sano.
Wasiirka Kalluumaysiga iyo Kheeyraadka Badda ahna Ra'iisul wasaare ku xigeenka Dawladda Federaalka Soomaaliya Prof. Ibbi oo munaasibadaas ka hadlay ayaa ugu horeyn u hanbalyeeyay Ciidamadan Tababarku u soo dhamaaday.
Wasiirka ayaa hoosta ka xarriiqay in dhalinyaradaas soo dhamaysatay tababarka Mariineyska in looga baahan yahay in ay ka faa'ideystaan duruustii ay soo barteen isla markaana shacabkooda ugu adeegaan Duruustii ay soo barteen.
Wasiirka Prof. Ibbi ayaa dhallinyaradaas uu tababarku u dhamaaday kula dar daarmay sidii ay hawlahooda u gudan lahaayeen isagoona u rajeeyay inay ku guulaystaan hawlaha ay qaranka Soomaaliya u qabanayaan.
Waxaa isaguna halkaa ka hadlay Taliyaha Ciidanka Badda Soomaaliyeed Admiral. Faarax Qare kaasoo ka war bixiyay qaabkii ay dhalinyaradan tababarkooda u qaateen iyo waliba duuriistii ay qaadanayeen.
Si kastaba Dufcaddan oo ahayd tii labaad oo halkaa ku dhamaysta Tababarka Mariineyska ayaa waxaa ay ka koobnaayeen illaa Sedax Boqol oo askeri iyadoo dhawaana isla goobtaa tababar loogu soo gaba gabeeyay dufcaddii 1aad oo ka koobneed illaa Shan boqol oo askeri kuwaasoo durbaba bilaabay in ay ka hawl galaan Biyaha Soomaaliya gaar ahaana Xeebaha Gobolkan Banaadir.
Sacuudiga oo diiday in burcad badeeda madax furasho la siiyo
Boqortooyada Sacuudiga ayaa waxaa ay ku baaqday in aan lacag madax furasho ah la siin Kooxaha Burcad badeeda Somalida ee ka horl gala Xeebaha Dalka Somaaliya iyo Gacanka Cadmeed.
Madaxa amaan duulaha Ciidamada Badda ee Sacuudiga ayaa waxa uu ugu baaqay Milkiilayaasha iska leh Marakiibta lagu heesto Xeebaha Dalka Somaaliya in aysan dhiibin wax madax furasho ah isla markaana aysan dheg u dhigin Dalabka ka soo yeeraya Kooxaha Burcad badeeda Somaalida.
Mas'uulkani ayaa waxa uu shegay in hadii Kooxaha Burcada La siiyo lacag madax furasha ah ay sii dhiira geliso Kooxahaasi isla markaana ay sii badinayaan weerarada ay ku hayan Marakiibta shisheeye ee Isticmaasha Biyaha Somaliya.
Waxa uu Sidoo kale sheegay in Hadii mar waliba la siiyo malaayin lacag madaxfurasho ah ay sii kordheyso awoodooda Burcad badeednimo isla markaana ay ku sii bahi doonaan Meelo kale oo ka fog xeebaha ay hada ka afduubtaan Maraakiibta.
Si kastaba ha ahatee Kooxah Burcad badeeda ayaa waxa ay sii laba labeen werarada Afduubka ay ku hayaan marakiibta shisheye ee marta Biyaha Somaaliya iyagoo marka ay gacanta ku dhigaan marakiibtaasi gor gortan la gala milkiilayaasha iska leh marakiibta ay gacanta ku dhigeen.
Banaanbax nabad lagu taageeraayo oo Muqdisho ka dhacay
Dibad baxan oo ay soo abaabuleen maamulka Gobolka Banaadir ayaa dad weynihii ka qayb galay oo ka kala socday degmooyinka Gobolka Banaadir qaarkood ayaa ugu danbayntii isugu soo Ururey Taaladii Daljirka Dahsoon ee degmada Boon dheere.
Dadkaas dibad baxayay oo u badnaa Haween iyo Caruur ayaa waxa ay ku qaylinayeen Anagu Nabad baan u baahanahay, Anagu Dawladnimo ayaan rabnaa iyo Ereyo kale oo ay ku codsanayeen in la joojiyo dhamaanba dagaalada ka dhacay gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaana magaalada Muqdisho.
Dibad baxaas ayaa waxaa ka hadlay Guddoomiyaha Degmada Boon dheere oo ka mid ah Guddoomiyaashii Dibad baxaas ka soo qayb galay isagoona ka hadlay Nabadda iyo faa'idada ay u leedahay Mujtamaca Soomaaliyeed.
Cabdullaahi Xirsi Wardheere Guddoomiyaha Degmada Boon dheere oo iyadu ah degmadii dibad baxaas marti gelisey ayaa sheegey inay taageersan yihiin in Cooladaha la dhameeyo, wixii khilaafaad ah ee jirana wada hadal nabadeed lagu dhameeyo.
Guddoomiyaha degmada Boon dheere ayaa hoga tusaaleeyay dadkii dibad baxaas ka qayb galay Dhibaatooyinka iyo khasaaraha uu gaystay dagaaladii u danbeeyay ee ka dhaca gudaha magaalada Muqdisho gaar ahaana degmooyin ay Boon dheere ka mid tahay.
Dhamaan mas'uuliyiintii kalee halkaa ka hadashay ayaa ka war bixiyay dagaalada iyo dib u dhaca ay bulshada u horseedaan iyo waliba nabadda iyo faa'idooyinka laga dhaxlo ee horumarka leh iyagoona u sheegey dadkaa sin ay ku taageersan yihiin Nabadda iyo Dawladnimada ay doonayaan.
Si kastaba dibad baxan ayaa noqonya kii u horeeyay ee lagu qabto barxadda daljirka dahsoon tan iyo markii dagaaladii u dhaxeeyay dawladda iyo kooxaha ka soo hor jeeda uu qarxay horraantii sanadkan.